GarsoorNews - WARBIXIN :- Farmaajoow Weli Far Baa Taagan!!!
WARBIXIN :- Farmaajoow Weli Far Baa Taagan!!!
by Farah C/laahi | Wednesday, Feb 15, 2017 | 81 views
Abdulkadir Dulyar (Garsoor Online) — Marka hore waa Nasri Alle iyo Nasiib wanaag in ay si nabad galya ah iyo rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ay ku soo Af meeranto 08 February 2017Ka Doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya ee lagu qabtay markii labaad Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho,mana aheyn guushaasi mid si fudud lagu gaaray ee waxaa laga soo maray dadaal iyo daal fara badan oo soo taxnaa tan iyo dowladihii KGMG ahaa oo aakhirkii suurtagal ka dhigay in aan dalkeena ku qabsano doorashooyinka.
Marka xiga ma aheyn bilowgii hore Sawirada laga helayay iyo aragtidayada laga kala bixinayay hanaanka ay Doorashada Dadbani dabayaaqadii sanadkii hore uga soo bilaabatay 6-da Maamul Goboleed iyo Caasimadaba, mid ay ku qanacsanaayeen inta badan Shacabka Soomaaliyeed ee sida dhow ula socday sida lagu daah furay hardanka iyo xusul duubka loogu jiray kuraasta Xildhibaanada, oo inta badan laga soo warinayay murano iyo cabashooyin is daba joog ah, maadaama la isku adeegsaday wax kasta oo la kari karay. ‘’Meelaha qaar waa la isku awood sheegtay ,Meelana waa la isku Dhaqaala sheegtay.Meela Kalana waxaa laysaga soo saaray isbaheysiyo Siyaasadeed oo looga gon lahaa in looga faa’ideysto doorashada dalka,’’…..Sidaa daraadeed dad badani rajo badan kama qabin in ay Doorashada Dadbani ku soo idlaan doonto Natiija wanaagsan.oo waxa ay rumeys naayeen in laaluushka iyo musuq maasuqu uu go’aamin doono cidda ku soo bixi doonta sanadkan.
Waxaase wax walba is badaleen markii la gaaray waqtigii la wada sugayay ee lagu balamay doorashada Madaxweynaha oo aheyd maalintii Arbacada, waxaana loo wada dareeraray Doorashadii oo doorkan Sababo Amni darteed loogu qabtay Xerada Ciidanka Cirka ee Afizione. waxaana goobta soo xaadiriyay 23 Musharax oo u taagan Tartanka kursiga Madaxweynaha iyo 328 Xildhibaan oo u soo diyaar garoobay ineey u kala gar qaadan. iyo sidoo kale Xubno ka kala socday Beesha Caalamka si ay marqaati uga noqdaan Doorashada.
Bilowgiiba waxaa goobta Doorashada looga cudur daaray Xildhibaanka kaliya ee maalintaa madasha xanuunka uga maqanaa balse AUN dhawaan geeriyooday,sidoo kale waxaa loo yeeray 3 Murashax oo laba ka mid ahi ay maalmo ka hor shaaciyeen ka haritaanka Musharax nimada kuwaas oo kala ahaa Dr Abdulaahi ,Md Mohamed Faroole iyo Md Zakariye Xaaji.
Hase yeeshee hadal uu maalintaa goobta ka jeediyay Xildh Zakariye ayaa noqday hadal taariikhiya islamarkaana qeyb ka ahaa sida muuqatay ololihii lagu dhiiri galinayay isbadalka sida laga dareemayayna si wey u saameeyay Xildhibaanada.
Intaa ka dib waxaa la guda galay Doorshadii oo u muuqatay iney si weyn uga duwaneyd tii 2012 kii. marka laga eego tirada Baarlamaanka. tan Musharaxiinta iyo hanaanka loo diyaariyayba. waxaana safka hore soo camiray 21 Musharax oo isku kalsoon oo ey ku jiraan 2-Madaxweyne iyo 2-Reysal wasaare oo horay dalka uga soo shaqeeyay, Musharaxiin lagu yaqaano Siyaasadda iyo kuwa ay wajiyadoodu nagu cusbaayeenba., Balse hadii cabir gaar ah lagu eego u muuqday ineey Musharaxiintu goobta Doorashada ku yimaadeen labo daraf oo kala ahaa daraf Isbadal doon ah iyo mid Horu socod ah.
Dad badani waxa ay si aad ah u xasuusteen soo bixitaankii Xildhibaanada iyo sidoo kale dhoolatusyadii ay sameeyeen waqtigii ololaha lagu jiray labada Musharax ee loo arkayay ineey ugu tun weyn yihiin sanadkaan sida weyna ugu xafiil tamayay masraxyada tartanka kuwaas oo kala ah Madaxweynaha talada hayay 4tii Sano ee la soo dhaafay oo isaga lagu tuhmayay dhaqaale iyo awoodo aan loo tirineyn Musharaxiinta kale. Iyo isaga oo weliba maalin ka hor doorashada soo bandhigay dhoolatus siyaasadeed oo aad u weyn oo ay ka sacaba tumayeen 220 Xildhibaan.
Sidaa si la mid ah Musharaxa labaad ee àad loo hadal hayay waxa uu ahaa Madaxweyihii DKGM aheyd Md Shariif Sh Axmed. oo qudhiisu xili uu kaftamayay meel fagaare ah ka sheegay Wixii lacago ah hala qaato balse in uu isagu sanadkaan Madaxweyne ka noqon doono dalka taasoo ay dad badani rumeysteen.
Markiise tirinta codadku bilowdeen dad badan ayey filan waa ku noqotay natiijada ka soo baxday Wareegii 1-aad ee Doorashada ka dib markii uu tirada Cododka hogaanka u qabtay Musharax Mohamed Abdullhi Farmaajo.
Sida sharcigu ahaa waxaa Wareega 2 aad u soo baxay 4-tii Murashax ee ugu Codadka badnaa oo kala ahaa.Md Xasan Shiikh., Md Sh. Shariif , Md Cumar C/rishiid iyo Md Farmaajo.
waxaase inta aan la guda galin Wareega labaad isaga hadhay Tartanka Musharax Cumar C/rishiid goobtana ka sheegay hadal u muuqday baaq uuna ku go’aaminayay halka loo weecin doono codadkiisa.
Mar kalaa waxaa kabaha isla gashaday wareegii 2 aad Sadexdii Musharax ee kale waxaana dhacay wixii dhici lahaa oo ah in ay cododku si weyn ugu hoobtaan dhankii Musharax Mohamed Abdullhi Farmaajo.
Dhamaan waa howl la wada qabtay marka laga reebo Musharax Xasan Shiikh Maxamuud oo isagu ahaa Musharax taageeradiisa iyo galaangal kiisa Doorashada ku aaminay qaar ka mid ah Madaxweyne Goboleedyadii ay soo dhistay Dowladii uu hogaaminayey iyo saaxiibadiisa gaarka ah oo qudha.
Waxaase Arin taariikhiya aheyd oo lagu wada farxay sida geesinimada leh ee uu uga haray Wareega 3aad isla markaana uu aqbalay durbadiiba natiijadii doorashada uguna hanbalyeeyay Musharaxii kaga guuleystay doorashada.
Dhanka kale waxa uu Noqday Md Farmaajo. Burburkii ka dib Madaxweynihii labaad ee dalka gudihiisa lagu doorto, waxa kaloo uu noqday Madaxweyne ay si wadajir ah mar qudha u soo wada dhaweeyaan Bulshada Soomaaliyeed waxaana ku dhawaaqistiisa oo aan la shaacin ka bilowday Dalka gaar ahaan Caasimadda isku soo baxyo lagu taageerayo Madaxweynaha la doortay.
Si taas la mid waxaa iyaguna taageero aan kala hadh laheyn u muujiyay Ciidamada Dowladda oo malaha habeenki doorashada farxad awgeed cirka u riday rasaas maalin dagaal ka badan.iyo dadka Soomaaliyeed ee ka daawanayay Shaashadaha kuna kala suganaa gobolada iyo dalka dibadiisaba, hase yeeshee halku dhiga sanadkaan doorashada laga dhaxlay waxa uu noqday ARFARMAAJO IIGEEYA.
Halkaa marka ay taagan tahay.!!! Madaxweynaha la doortay Md Mohamed Abdullhi Farmajo, waxa ay Shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogee ka filanayaan filasha aad uga culeys badan miisaan kiisa iyo maskaxdiisaba, taasoo ah in uu u qaban doono dhaman rajooyinkii ay ku waayeen dagaalada sokooye. Sida Dowlad wax qabad leh, wanaajinta xiriirka caalamka, Siyaasad xasiloon, Dhismaha Ciidamada, Saarista Ciidamada Shisheeye, Abuurista ilo dhaqaale, Cadaalad, Nabad, Midnimo, Horumar, Barwaaqo. iyo qodoba kaloo aan ka tagayba,lagana yaabo dhamaan qodobadaasi iyo kuwa ka badanba iney shacabka u jidbeysani ka doonayaan Madaxweynaha Cusub in uu si dag dag ah ugu wada qabto Taasina waa mid aan suurtagal aheyn marka loo fiiriyo burburka dalka iyo dadka soo gaaray inta uu le’eg yahay.
” Xusuus noow hadaad horay u aragtay wadamo loogu yeero dalalka horumaray kuma hor marin oo kaliya iney heleen Madax wanaagsan, ee waxaa hor mariyay Shacab mideysan oo dhistay Wadankooda kana ilaaliyay xumaanta, ”
Sidaa daraadeed maanta waxaa shacabka Soomaaliyeed iyo Baarlamaan kaba la gudboon si ay mira dhal u noqoto taageeradeedu iney si ficil ah u garab istaagaan Madaxda Sare iyo Xukuumada soo socotaba si loo xoojiyo shaqooyinkii adkaa ee ay dalka ka soo qabteen dowladihii isaga kala dambeeyay, una dhabawdo in awooda shacabku ay tahay mida kaliya ee maanta wax ka badali karta marxaladda uu dalkeenu ku sugan yahay. mustaqbalka dhowna aan ku guuleysano qeybo ka mid riyooyin keena.
“Walwalka kaliya ee aan qabo waa inaan qaban waayo wax yaabaha ay iga rajeynayaan inaan u qaban doono shacabka Soomaaliyeed.” Sidaa waxaa yiri Madaxweyne Farmaajo xiligii uu ku jiray ololaha doorashada,……. waana mid muujineysa Dareenka uu Madaxweynaha la doortay ka qabay culeysyada is dul saaran ee ka jira Dalkeena iyo caqabadaha ku hor gudban.
Dhanka kale Dunidaan aynu joogno Siyaasi kasta oo ku Guuleysta Xil uu u tartamay kaligii guul ma keenin ee waxa uu helay dad u heelan oo doonaya ineey guul wada gaaraan.” ……waa xaqiiq hadalkaasi waayoo hadii aaneey u heelanaanta ISBADAL DOONKA ahi ka dhex jiri laheyn Baarlamaanka iyo Shacabkaba waa hubanti in aysan Md Farmaajo iyo Saaxiibadiiba ku guuleysan laheyn Qorshahoodii Doorashada.
Si kastaba,Madaxweynaha cusub waxaa ku Horyaala howlo aad u cul culus oo u baahan taxadar iyo go’aan qaadasho dhab ah iyo inuu u xusho shaqada Dowladda uu hogaamin doono shaqsiyaad aqoon iyo Wadaniyad leh oo aan ku imaan Qabiil, Urur iyo Saaxiib tinimo, maadaama arinku ka duwan yahay waqtigii 6 da bilood ahaa ee soo martay Md Farmaajo, oo runtii aheyd markii ay qalbiyadooda siiyeen Ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeedba.
Ugu dambeyntii Md Madaxweyne, waxaan doorkaana ku leenayahay waan ku siinay mar kale Qalbiyadeena ee Rabi ha kula garab galo masuuliyadda uu noogu kaa dhiibay oo run ahaantii ah mid ka culus tii hore, ogoowna Alle SWTC ka sokoow Rajada kaliya ee ay maanta dadka Soomaaliyeed eeganayaan waa Adiga iyo Xukuumadda kula shaqeyn doonta,inta ay ka arkayaan waxa ay kaa filanayaan oo ah dowlad u adeegta dal iyo dibadba oo aan ka adeegan. dad weynuhuna ay wax ku darsan karaan waxa ay ku leeyihiin Shacabkaagu:- FARMAAJOOW WELI FAR BAA NOO TAAGAN.!!
WQ:- Abdulkadir Dulyar
Video: Dowladu Maxay Ka Tiri Saldhiga Berbara
Maxaa Maanta Ka Dhacay Xarunta Villa Somalia